यहोवाका साक्षीहरूको विश्वव्यापी कार्यको लागि खर्च कसरी जुटाइन्छ?
चेक साङ्केतिक भाषा
रोमानियन साङ्केतिक भाषा
हाम्रो सङ्‌गठनले हरेक वर्ष लाखौं बाइबल, पत्र-पत्रिका तथा पुस्तक-पुस्तिका छाप्छ र निश्शुल्क वितरण गर्छ। साथै हामी राज्य भवन अनि शाखा कार्यालयहरूको निर्माण र त्यसको स्याहारसम्भार गर्छौं। हामी हजारौं बेथेल सेवक र मिसनरीहरूको आवश्यकता पूरा गर्छौं। साथै प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपर्दा राहत सामग्री उपलब्ध गराउँछौं। यो सबै सुन्दा तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्‌छ होला, ‘यी कुराहरूको लागि खर्च कसरी जुटाइन्छ?’
हामी कुनै भेटी, दशांश वा चन्दा सङ्‌कलन गर्दैनौं। हाम्रो प्रचारकार्यको लागि धेरै खर्च लाग्छ, तैपनि हामी कसैसित पैसा माग्दैनौं। यही कुरा लगभग एक सय वर्षअघि छापिएको प्रहरीधरहरा (अङ्‌ग्रेजी) पत्रिकाको दोस्रो अङ्‌कमा बताइएको थियो। त्यस पत्रिकामा, यहोवाले हाम्रो कामलाई साथ दिइरहनुभएको छ भन्ने विश्वस्तता व्यक्त गर्नुका साथै “सहयोगको लागि मानिसहरूसित कहिल्यै माग्ने वा हात फैलाउने छैनौं” भनेर पनि बताइएको थियो। हुन पनि हामीले त्यसो गरेका छैनौं।—मत्ती १०:८.
हाम्रो गतिविधि स्वेच्छिक अनुदानद्वारा सञ्चालन हुन्छ। हामीले गरिरहेको बाइबल­आधारित शैक्षिक कार्यक्रमको थुप्रै मानिसले कदर गर्छन्‌ र यसको लागि अनुदान दिन्छन्‌। सारा पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न यहोवाका साक्षीहरू राजीखुसीसित आफ्नो समय, शक्ति, पैसा र अन्य स्रोत-साधन खर्च गर्छन्‌। (१ इतिहास २९:९) हाम्रा राज्यभवन, सम्मेलन र अधिवेशनहरूमा अनुदान बाकस राखिएका हुन्छन्‌ र अनुदान दिन चाहनेहरूले त्यसमा खसाल्न सक्छन्‌। साथै हाम्रो वेबसाइट jw.org बाट पनि अनुदान दिन सकिन्छ। हामीलाई प्राप्त हुने अनुदानमध्ये प्रायजसो अनुदान थोरै आयस्रोत भएकाहरूले नै खसालेका हुन्‌। येशूको समयमा पनि कुरा त्यस्तै थियो किनभने उहाँले मन्दिरको दान­पात्रमा दुई साना सिक्का खसाल्ने एक जना गरिब विधवाको निकै प्रशंसा गर्नुभयो। (लूका २१:१-४) त्यसकारण हरेकले “आफ्नो मनमा निर्णय गरेबमोजिम” अनुदान दिनको लागि ‘केही छुट्टयाएर राख्ने’ बानी बसाल्न सक्छन्‌।—२ कोरिन्थी ९:७; १ कोरिन्थी १६:२.
यहोवाको इच्छा पूरा गर्न उहाँको राज्यसित सम्बन्धित गतिविधिलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले ‘आफ्नो धन-सम्पत्तिले परमप्रभुको आदर’ गर्न चाहनेहरूलाई उहाँले त्यसो गरिरहने मन दिनुहुनेछ भनेर हामी विश्वस्त छौं।—हितोपदेश ३:९.
हाम्रो सङ्‌गठन अरू धार्मिक सङ्‌गठनहरूभन्दा कसरी भिन्न छ?
स्वेच्छिक अनुदानहरू केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
भिडियो क्लिप: यहोवाका साक्षीहरूले आफ्नो सङ्‌गठनको खर्च कसरी बेहोर्छन्‌?
विश्वव्यापी तवरमा हामीलाई कसरी सहयोग गरिन्छ र कसरी अनुदान दिइन्छ, हेर्नुहोस्।
प्रहरीधरहरा र ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकाहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।